१५ वर्ष जेल हाल्ने साइबर कानून आउँदै, के गर्न पाइँदैन सामाजिक सञ्जालमा? – Online Bichar
१५ वर्ष जेल हाल्ने साइबर कानून आउँदै, के गर्न पाइँदैन सामाजिक सञ्जालमा?
Online Bichar 17th January, 2019, Thursday 1:08 PM
काठमाडौं, २ माघ । हृयाकरलाई ५ वर्ष कैद १० लाखसम्म जरिवाना सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि कठोर कारवाहीको माग भइरहेका बेला सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संघीय संसदमा पेश हुन लागेको नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकमा अनधिकृत रुपमा कुनै पनि अनलाइन डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन गरेमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै अनधिकृत रुपमा कुनै विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सुचना कपी(पेष्ट गरेमा पनि १ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
मन्त्री भन्छन्: साइबर अपराध चुनौतीपूर्ण